Ikamelo elilodwa enkabeni ye-Torshavn B&B - I-Airbnb
Ikamelo elilodwa enkabeni ye-Torshavn B&B
Tórshavn, i-Faroe Islands
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Anette Og Eydun
U-Anette Og Eydun uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Leli kamelo (No. 4) lisesitezi sesibili.
Indlu yangasese / ubhavu ohlanganyelwayo: eyodwa isesitezi sokuqala futhi enye isesitezi sesibili. Sinamakamelo angu-4 futhi sonke sinendawo yezivakashi ezingu-7. Isidlo sasekuseni sifakiwe. Sihlala endlini futhi.
Ulwazi oluthe xaxa mayelana: torshavn-bed-and-breakfast.123hjemmeside (kuphela nge-dot dk)
I-Bed and Breakfast yethu eduze nenkaba yedolobha elikhulu i-Torshavn. Sinamakamelo angu-3, anendawo yabantu abangu-2 ekamelweni ngalinye. Elinye lamakamelo linemibhede emibili emibili, kanti amanye amakamelo amabili anombhede olala abantu ababili ngamunye. Siphinde sibe negumbi elilodwa. I-Wi-fi yamahhala
Indlu yethu iseduze nenkaba ye-Torshavn. Uqhele cishe ngemizuzu engu-10 ukuya e-Port nase-helipad. Zonke izimpi ezizungeze i-Faroe Islands zizoshayela zisuka e-Port futhi nakanjani zonke izikebhe zizohamba zisuka e-Port. I-helicoptor izondiza usuku ngalunye ihlanganisa Iziqhingi zase-Faroe.
Futhi cishe kuthatha imizuzu engu-10 ukuya enkabeni ye-Torshavn, lapho uzothola khona izindawo zokudlela eziningi, i-café, ama-barrs kanye nezitolo.
4.96 (izibuyekezo ezingu-47)
I-Torshavn ingenye yezinhloko-dolobha ezincane kunazo zonke emhlabeni ezinabantu abangu-15.000.
Noma kunjalo, i-Torshavn inokuningi ongakunikeza. Phakathi kwezinye izinto, i-Torshavn inezindawo eziningi zokudlela, izindawo zokudlela, ama-bar nezitolo.
Ngaphansi kwechweba izikebhe zingena futhi zithengise inhlanzi yazo entsha.
Kunezinhlobo eziningana zomculo e-Torshavn phakathi nehlobo. Ngezikhathi ezithile abanye abaculi badlala ngaphandle kokukhathazeka phakathi nendawo.
Futhi i-Torhavns inesiko elicebile lokuphila, i-Listasavn Føroya (imnyuziyamu) ia indawo ye-beautifull ongavakashela kuyo, i-Nordic House inokuningi ongakunikeza phakathi kweminye imibukiso, amakhonsathi omculo, izinkulumo nobusuku obukude nokudla kwase-Faroese.
Kukhona namamnyuziyamu emvelo afanele ukuvakashelwa.
Ibungazwe ngu-Anette Og Eydun